Archives des Fihirana Jesosy Mamonjy android - Lalamasaka Hatry ny Ela
Catégorie : Fihirana Jesosy Mamonjy android
par ANDRIATSALAMA Hermys · Published 11 février 2021
Fihirana Jesosy Mamonjy 2020
Fihirana elektronika natokana ho vakiana amin’ny Smartphone na Tablette android. Efa misy ny fihirana taona 2020. Ity Fihirana ity dia natao manokana ho hampiasain’ireo mpitendry zava-maneno noho izy manafaingana amin’ny fitadiavana sy ny fitadidiana ny hira ary ny clé. Noho izany dia tsy mahasolo velively ny fihirana taratasy (na version imprimée). Tsara kokoa ny mpitarika hira ao anaty fivoriana sy...
par Administrator · Published 18 mars 2020 · Last modified 16 avril 2020
Fihirana elektronika natokana ho vakiana amin’ny Smartphone na Tablette android. Ity Fihirana ity dia natao manokana ho hampiasain’ireo mpitendry zava-maneno noho izy manafaingana amin’ny fitadiavana sy ny fitadidiana ny hira ary ny clé. Noho izany dia tsy mahasolo velively ny fihirana taratasy (na version imprimée). Tsara kokoa ny mpitarika hira ao anaty fivoriana sy ny mpivavaka raha mitondra ny fihirana...